Ahoana no hampitomboana ny fiovam-po sy ny fitarika amin'ny finday | Martech Zone
Ity misy enti-mody ho anao alohan'ny hamakianao ity.
Inona ny anao isan-jaton'ny fiovam-po mitranga izany amin'ny alàlan'ny finday sy ny birao? Ao amin'ny Google Analytics, safidio Fiovam-po> Tanjona> Fiovam-po ary safidio ny Fifamoivoizana finday ho an'ny vondrona voalohany anao ary ny fivezivezena tsy miankina amin'ny finday ho an'ny faharoa:
Inona ny anao isan-jaton'ny fifamoivoizana mitranga izany amin'ny alàlan'ny finday sy ny birao? Ao amin'ny Google Analytics, safidio Mpijery> Topimaso ary safidio ny Fifamoivoizana finday ho an'ny vondrona voalohany anao ary ny fivezivezena tsy miankina amin'ny finday ho an'ny faharoa:
Ny ohatra omeko etsy ambony dia ny mpanjifa B2B, noho izany misy fanazavana vitsivitsy momba ny tsy fitovian'ny roa tonta. Azoko antoka fa ireo mpanapa-kevitra B2B dia mety hiova miaraka amin'ity mpamatsy azy ity amin'ny alàlan'ny birao. Ny tsy fitoviana - raha misy - dia miankina betsaka amin'ny tobin'ny mpanjifanao. Mety taraiky ao ambadiky ny birao ny finday, na dia lasa mahazatra kokoa aza ny fizahana finday sy fividianana finday. Na izany aza, araka ny Google 2015 tatitra, misy fikarohana maro kokoa mitranga amin'ny finday noho ny amin'ny birao… izao misy ny fotoana.
Ny fomba hanatsarana ny fantsom-pivarotana finday dia tena tsy mitovy amin'ny fanatsaranao ny fantsonao hafa. Ny traikefa amin'ny varotra finday dia tokony ho mahomby sy mahomby amin'ny dingana rehetra. Mampalahelo fa orinasa maro no tsy manana tetikady fivarotana finday mirindra. Zava-dehibe ho an'ny orinasanao ny mahatakatra izay mampiavaka ny fivarotana finday mba hahafahanao mamorona drafitra sy paikady miroborobo.
Azonao atao ny mijery ny tahan'ny ary manao asa miaraka amin'ny tranokalanao mba hahazoana antoka fa afaka mamafa ny olana rehetra ianao ary manidy ny elanelana misy eo amin'izy roa. izany infographic avy amin'ny Salesforce manondro fomba 6 hanatsarana ny isan'ny fitarihana varotra finday:
Tokony ho sariaka amin'ny finday ny tranokalanao - ny famolavolana anao dia tokony hamaly ny haben'ny efijery samihafa, ny votoatinao tokony ho mora vakiana, ny antso-to-hetsika sy ny bokotra tokony ho mora tsindriana, ary tokony hanana bokotra tsindrio-to-call ianao.
Mampandeha doka finday amin'ny media sosialy - ny mpanapa-kevitrao sy ireo izay mitaona ny fanapahan-kevitry ny fividianana dia amin'ny fampiharana sosialy finday mandritra ny andro. Ny doka ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny finday ao amin'ny Twitter, Facebook, ary LinkedIn dia manana fotoana kendrena tsara.
Hatsarao ny fotoana fandefasana pejy web finday - araka ny KISSMetrics, 47% ny mpanjifa manantena ny handefasan'ny pejin-tranonkala iray ao anatin'ny roa segondra na latsaka ary 40% ny olona mandao tranonkala iray izay maharitra mihoatra ny telo segondra ny enta-mavesatra Ny fihemoran'ny pejy iray segondra dia mety hampihena ny fiovam-po 7%
Fitsapana ny pejy fitobiana findainao A / B - izahao toetra ny layout, ny lohateny, ny atiny ary ny fiantsoana anao hahitanao hoe iza avy ireo endrika mamoaka tahan'ny fiovam-po avo indrindra.
Mamorona pejy Google My Business mifantoka amin'ny mpanjifa ho an'ny eo an-toerana - mihabetsaka ny mpanjifa sy orinasa mampiasa sarintany hitadiavana mpamatsy manodidina azy ireo. Aza hadino ny anao Google Business pejy dia havaozina ary mampiasa ny safidy rehetra eo ianao, ao anatin'izany ny sary.
Manatsara ny làlan'ny fiovam-ponao - ahenao ny isan'ny dingana hanovana ny mpitsidika ho lohany, hiantohana fa tsotra sy mazava ny làlan'ny fividianana. Ary mazava ho azy, ampiasao ny dokam-barotra famerenana retargeting sy tolotra tsara hitaomana ny mpitsidika hiova fo.
Ity ny Infographic, Fomba fanatsarana bebe kokoa ny varotra finday:
Tags: ab testinglalan'ny fiovam-potaham-panovanatanjonagoogle ny orinasakoahoana nony fomba fampitomboana ny fitarihana varotradoka findaytaham-panovana findaynamana mahafinaritrafitarihana findaymitarika fivarotana findaysosialy findaydoka ara-tsosialy findayfitsapana findayfifamoivoizana findayfinday mifanohitra amin'ny biraofinday vs biraotsy fivezivezena amin'ny findaymitarika varotrafinday ara-tsosialy
Waze Local: Avelao ny mpamily Waze hahita ny orinasanao rehefa eo izy ireo
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny orinasanao nefa tsy very ny fifamoivoizana